Shabakadaha Kombiyuutarka ee loogu talagalay SMEs: Hordhac | Laga soo bilaabo Linux
phico | | GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Ka dib in ka badan 2 sano iyo badh ka maqnaansho meeshan dhijitaalka ah, oo aan aad ugu raaxaysanay akhrinta qoraaladaada, waxaan ku laabanay inaan sii wadno tabarucaadka aqoonteenna hooseeya ee adduunka ee Software-ka Bilaashka ah.
Sidaan had iyo jeer sheegnayba, waxaad uun ka heli doontaa "Hal Gelitaan Dheeraad Ah" maado kasta. Uma jeedno inaan wax walba ognahay, mana iska dhigno inaan beddelno maaddada daraasadda ugu fiican ee aan ka helno Buugaagta ama lab amar kasta; maqaallo kale oo lagu daabacay Tuulada WWW; suugaanta gaarka ah; wikis loogu talagalay barnaamijyada ama nidaamyada hawlgalka; buugaagta, iwm.
Ma lihin waqti ama aqoon nagu filan oo aan ku daabacno shay aad u fiican sida buugga oo qaab PDF ah «Isku-xidhka Adeegga GNU / Linux«, Waxaa qoray qoraaga Joel Barrios, compendium oo aan aad ugu boorinayno in si taxaddar leh loo barto - taas oo aan ahayn kaliya akhriska degdegga ah - iyo hirgelinta, kuwa isticmaala CentOS, OpenSUSE, Debian, ama qaybinta kale ee LINUX.
Waxaan ku bilaabi doonnaa qoraallo taxane ah oo ku saabsan Shabakadaha kombiyuutarka, aad ayey lagama maarmaan ugu tahay shaqada saxda ah ee shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ama SMEs, maadaama magaceeda laga diiwaan galiyay wadamada ku hadla Isbaanishka.
Waxaan rajeyneynaa in dadaalka iyo waqtiga u hurey diyaarinta dhamaan qodobada lagu magdhabi doono aqrintaada iyo waxtarka aad matasho.
2 Maqaallo horey loo daabacay
2.3 DHAQAN, Isc-Dhcp-Server, iyo Dnsmasq
2.4 Kaabayaasha, Xaqiijinta iyo Adeegyada
3 Mawduucyada qaarkood ayaa la daboolay iyo in laga wada hadlo
3.1 Xaqiijinta iyo Adeegyada Shabakadda oo ku wajahan SME
4 Soo jeedinta wadashaqeynta
Kuwa mas'uulka ka ah u adeegida shabakaddan, waxay noqon karaan cinwaannadooda Maamulayaal, Maamulayaasha Shabakada, Maamulayaasha Nidaamyada, sysadmin, ama magac kale, waxaan mas'uuliyad ka saaran nahay inaan si daah furnaan ah ugu adeegsanno isticmaalaha xarumaha, taxane dhan Adeegyada Shabakadda sidee yihiin Xallinta Magaca Domain; Meeleynta Cinwaanka IP-ga ee Dynamic; marin u hel internet; Adeegyada Farriinta iyo Boostada Elektaroonig; Adeegga Xaqiijinta Adeegga iyo Mashiinka, iyo liis dheer oo ah adeegyo kale oo ku xirnaan doona baaxadda iyo ujeeddada Shabakadda.
Waxaan ka heli doonnaa noocyo, cabirro, iyo ujeeddooyin isku mid ah Shabakadaha Kumbuyuutarka: qaar fudud iyo kuwo kale oo adag; qaar si ay u bixiyaan adeegyada Xafiiska iyo Xisaabinta sida ugu weyn; kuwa kale oo ku takhasusay hawsha Naqshadeynta Kombuyuutarka, ama CAD; shabakadaha mashiinka ee adeegsadayaasha ku takhasusay barnaamijyada nidaamyo kala duwan, marka la soo koobo, El Mar.
Baaxadda iyo waxa ku jira Shabakadaha Kombiyuutarka waa sida Christopher Columbus u yiri: "La Mar Oceana." Tusaalaha ugu badan, aragtidayda: Tuulada WWW ama internetka.
Waxay noqon doontaa waali in la isku dayo in la sharaxo mid kasta oo ka mid ah noocyada shabakadaha ee suurtogalka ah, iyo sidoo kale mid kasta oo ka mid ah adeegyada suurtagalka ah ee aan ugu baahan karno shabakad gaar ah. Annaguna ma nihin waalan, ama uguyaraan taasi waa waxa aan u malayno. 😉.
Sidaa darteed, waxaan diiradda saari doonaa waxa ugu badan ee noqon lahaa a Fasalka «C» Shabakadda Aagga Deegaanka, oo leh xarumihiisa ugu badan ee ay ku shaqeeyaan Microsoft © Windows operating system, iyo marin u helka internetka. Waxaan ka wada hadli doonaa adeegyada muhiimka ah iyo kuwa ugu badan ee la isticmaalo.
Maqaallo horey loo daabacay
Liiska maqaallo la daabacay - amar macquul ah oo ka madax banaan taariikhda daabacaadda - oo toddobaad kasta la cusbooneysiin doono, waa kuwan soo socda:
Qeybinta waqtiga qaybinta Linux
Rakibaadda Goobta Shaqada
6 Miisaaniyada Debian
Soo bandhigida CentOS
openSUSE: Soo bandhigid
KDE The Fast and Elegant KDE ee furanSUSE 13.2 Harlequin
Ku-ficil-sameynta Debian: Hordhac
Qemu-Kvm + Maamulaha Virt-ka ee Debian
Maamulaha Virt-ka iyo Virsh: Maamulka fog ee loo maro SSH
Centos 7 hyperpisor II
Shabakadaha SME: markii ugu horreysay oo la jaro
DHAQAN, Isc-Dhcp-Server, iyo Dnsmasq
DNS iyo DHCP oo kujira OpenSUSE 13.2 "Harlequin"
DNS iyo DHCP ee CentOS 7
DNS iyo DHCP ee Debian 8 «Jessie
XIDHIIDHKA iyo Tusaha Firfircoon®
Dnsmasq ee CentOS 7.3
Dnsmasq iyo Tusaha Firfircoon®
Kaabayaasha, Xaqiijinta iyo Adeegyada
[Fikradda] Kaabayaasha iyo Adeegyada Xaqiijinta
Qaabeynta shabakada iyo maaraynta
Xaqiijinta Squid + PAM
Haddii aan si dhow u eegno, waxaan isku dayeynaa inaan soo bandhigno aragti guud oo ku saabsan sida loo wajahayo hirgelinta Shabakad SME ah, iyadoo loo qaadan doono bar bilow ah laba qaybood oo si xoog leh loogu wajahayo ganacsiga adduunka -CentOS / Koofiyad Cas y furanSUSE / SUSE- iyo qaybinta guud ee ka jirta Linux Universe, taas oo aan u aragno Debian.
Amarka xiriiriyeyaasha kor ku xusan mararka qaarkood maahan taariikh ahaan marka loo eego taariikhda maqaal kasta la daabacay. Saas ma aha, waxay ka jawaabaysaa xiisaha aan u qabno in loogu akhriyo taxanahaas. Haddii aan si dhow u eegno waxaan arki doonnaa:
Marka hore waxaan dhahnaa sababta aan u dooranay kan diirrada kor ku xusan, oo ku saleysan Qaybinta waqtiga ee qaybinta Linux.
Markaa waxaan iska dhigeynaa xarun u qalanta SysAdmin, labadaba Debian iyo gudaha OpenSUSE.
Mar dambe ayaan barannaa sida loo sameeyo Hypervisor Functional, kaas oo taageeri doona dhammaan server-yada dal-ku-galka ah ee aan u baahan nahay.
Kadib waxaan ka mid noqonaynaa Server kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaan dhihi karnaa "qayb" sababtoo ah Borotokoolka Waqtiga Shabakada Waan arki doonnaa markaan taabanno mowduuca Hubinta.
Mawduucyada qaarkood ayaa la daboolay iyo in laga wada hadlo
Xaqiijinta iyo Adeegyada Shabakadda oo ku wajahan SME
Aqoonsiga PAM. Hirgelinta adeegyada shabakadaha, oo leh xaqiijin iyo oggolaansho laga helo aqoonsiga isticmaaleyaasha ka diiwaan gashan hal adeeg oo keliya:
Server ku saleysan CentOS 7 -waxaa labada shabakadood isku xira- oo leh desktop MATE, NTP, DNSmasq, CentOS / Red Hat FirewallD, Runway - Gawaarida marin-u-helka Internetka, Maareynta Isticmaalaha iyada oo loo marayo is-dhexgalka muuqaalka, Squid, iwm.
Maareynta isticmaalaha maxalliga ah ee leh Xeerarka Furaha.
Server fariin Daawasho - Borotokoolka XMPP
Suurtagal, Adeegga boostada
Adeegga Helitaanka Tusaha oo ku saleysan OpenLDAP
Maamulaha Domain - Diiwaanka Firfircoon ee ku saleysan Samba 4 ugu yaraan laba ka mid ah qaybinta la doortay.
Faylka Server-ka ee Microsoft © Shabakadaha ku saleysan Samba4
Adeegga Wareejinta Faylka ee ku saleysan Proftpd
Adeegyada kale ee aan muhiimka ahayn, laakiin taasi si ballaaran ayaa loo isticmaalaa
Ku Bilowga Maamulka Adeegga ama kuwa doonaya inay wax ka bartaan waxqabadka, waxaan si xoog leh kugula talineynaa in laga bilaabo bilowga, iyo sida loo soo jeediyay.
Kuwa doonaya inay arkaan adduunyo dhammaystiran oo ka badan kan la soo jeediyay, waxay booqan karaan bogagga internetka ee kala duwan ee loogu talagalay mowduucyada Shabakadaha iyo Adeegyada. Waxaa jira in badan oo iyaga ka mid ah oo Isbaanish ah, Ingiriis ah, iyo sidoo kale luqado kala duwan oo bini aadamku meerahan kaga hadlo.
Intaas waxaa sii dheer, waxaan qorsheyneynaa inaan qormooyin yar oo taxane ah ku qorno FreeBSD si tan mid yar loo yaqaan Giant Lama yaqaan ee Software Bilaash ah.
Soo jeedinta wadashaqeynta
Haddii Jaamacad, Dugsi, Machad ama Shirkad kasta ay xiiseyneyso hirgelinta Koorso Fogaan ah oo ku saabsan mowduucyada la soo qaaday iyo kuwa lagama maarmaanka u ah in lagu daro, fadlan noo soo qor adigoon shaki yar ama daahin. Halkan waa adiga.
Antonio Antonio Valdes Toujague
Waxaan kugu sugeynaa qeybaha soo socda!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Shabakadaha Kombuyuutarka ee loogu talagalay SMEs: Hordhac
Waa salaaman tahay, Fiican Fiican ... taxanihi hore waa kuwo aad u wanaagsan waana rajeynayaa midkaan ...
Fadlan hubi in qaybta e-maylka aysan ahayn "Suurtagal", waa bayaan!
Nasiib wacan taxanaha, waan raaci doonaa.
Waxyaabaha ugu fiican ee aan akhriyay, waxaan rajeynayaa qoraalada soo socda. Salaan Fico!
Hordhac aad u fiican, waxaan ka bilaabayaa adduunka maamulka shabakada waxaanan hubaa in taxanahan aad soo jeedineyso ay wax weyn ka tari doonaan isla markaana hagi doonaan.
Aad baad ugu mahadsan tihiin inaad faallo ka bixiseen magaca kooxda DesdeLinux. Caawinta qiimaha badan ee Luigys ee sharafta leh, waxaan u maleynayaa inaan ku raaxeysan karno qaybta xigta, haddii aysan ahayn maanta, berri.
Digirta Hanibball dijo
Sidee weyn, tani waxay igu habboon tahay sida galoofyada, waxaan sugayaa daabacaadaha.
Ku jawaab Hanbalball Bean
Tixdani waxay ballanqaadaysaa waxyaabo badan, waa in ka badan khibradda la xaqiijin karo ee Fico, oo lagu daray qaabkiisii ​​fiicnaa ee qorista iyo diiwaangelinta, waxay qofka ka dhigeysaa inuu si ballaadhan ugu koro aqoonta
Aad baad ugu mahadsantahay Fico sida wanaagsan ee aad uheshay iyo wax ku biirintaada wanaagsan.
Waa humanOS dijo
Boostada waa mid aad u wanaagsan, sida had iyo jeer, waxay noo keenaysaa sida ugu fiican ee caqligeeda.
Jawaab Ale humanOS
Aad u fiican .. sugaya kuwa soo socda, faafaahin aad u wanaagsan!
Ku jawaab gpaulino
isxaaq 88 dijo
Runtii waan ka helay soo jeedinta ah inaad keento Fico, waqti badan ayey qaadatay ilaa aan aqriyay maqaalo aad sameysay. Runtii wax walba oo nolosha ka mid ah waxay ku bilowdaan dhibic. Bilowgii iyo mahadsanid silsiladan oo durba aniga xaqiiqdaydu tahay, maxaa yeelay waligaa nama aadan fashilin; Maamulayaasha shabakada SME waxay si weyn u balaarin doonaan aragtideena.
Sida Hanibball Bean uu dhihi lahaa maalmo ka hor, waa mid ku habboon, kaliya maahan kuwa bilaabaya, xitaa kuwa khibradaha leh waan ogahay inay sii wadi doonaan. Sl2 iyo subax wanaagsan dhamaantiin.
Ku jawaab crespo88
Ah, waan ilaaway inaan idhaahdo taxanaha yar ee maqaalada ee kusaabsan FreeBSD ayaa ugu cusub soojeedintaada.
Waad ku mahadsantahay faallooyinka, saaxiib Crespo88 !!!. Waan arki doonaa haddii kuwa jecel Linux ay xiiseynayaan FreeBSD Free Software. Waxaan fursad u heli doonnaa inaan ku ogaano inay arintu sidan tahay iyo in kale.
Hagaag, waan sugeynaa.
Hi Fico: Waxaan aqriyay ereyga cusub ee boostada "Shabakadaha Kombiyuutarada ee loogu talagalay SMEs - Hordhac" runtiina waan jeclaaday fikradda ah "... qorista taxane yar oo maqaalo ah oo ku saabsan FreeBSD si aan u barto kooxdan aan la aqoon ee ah Software-ka Bilaashka ah" xoogaa. » adoo adeegsanaya ereyadaada. Marka waxaan siinayaa dareen bilow ah si aan u bilaabo wax ka qabashada qaybintaan bilaashka ah ee UNIX.
Waxaan sidoo kale xiiseynayaa 2-da qoraal ee ku saabsan sugida.
Adeegyada shabakaduna waxay ku wajahan yihiin SME, gaar ahaan "Adeegga Wareejinta Faylka ee ku saleysan Proftpd" illaa inta aad ka suurtoobi karto haddii ay suurtagal tahay in la hirgeliyo xaqiijinta iyadoo la adeegsanayo isticmaaleyaasha Tilmaamaha Firfircoon ee ku saleysan Samba 4 halkii laga isticmaali lahaa isticmaalayaasha maxalliga ah.
Waxaad ii sheegtay inaan ku xasuusiyo qodobadii horey loogu daabacay DNS Bind a howto ku saabsan sida loo hirgaliyo Aragtida Dadweynaha.
Waxba ma sugayo… ..
Ku jawaab Iwo
Salaan IWO!. Waan arki doonaa sida aan ugu qancino codsigaaga. Nagala soco inaadan ka qoomameyn doonin!, 😉
Khamriga la heli karo 1.9.23 oo leh taageero Myst V: Dhamaadka Da'da